Bruno Fernandes Oo Ka Hadlay Inuu Ku Biirayo Kooxda Barcelona
HomeWararka CiyaarahaBruno Fernandes oo ka hadlay inuu ku biirayo kooxda Barcelona
January 9, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United weeraryahankeeda Bruno Fernandes ayaa beeniyay warar sheegayay inuu ku biirayo Barcelona xagaagan.
27-sano jirkaan ayaa mar kale ahaa ciyaaryahan muhiim u ah Red Devils intii lagu jiray ololaha 2021-22, isagoo u saftay 24 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay shan gool iyo sagaal caawin.
Si kastaba ha ahaatee, warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegtay in Fernandes uu ku jahwareeray Old Trafford ka dib imaanshiyaha Cristiano Ronaldo xagaagii hore, waxaana uu doonayay inuu ka tago kooxda reer England dhamaadka sanadkan.
Wakiilka xiddiga heerka caalami ee dalka Portugal Jorge Mendes ayaa lagu Xamanayaa inuu la xiriiray Barcelona si uu kooxda reer Catalonia u soo bandhigo fursad ay kula soo saxiixato kalyantigiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Fernandes ayaa meesha ka saaray warbixinnada suuqa kala iibsiga, isagoo ku sifeeyay “warbaahin xun”.
Kubadsameyihii hore ee Sporting Lisbon ayaa kursiga keydka ku soo bilowday kulankii Wolverhampton Wanderers ee Premier League markii ugu dambeysay laakiin wuxuu riixi doonaa inuu ku soo laabto line-upka kulanka Aston Villa ee FA Cup.